China Glass Whisky Decanter ho an'ny orinasa mpamokatra alikaola sy mpamatsy | Hoyer
Sakafo Whisky fitaratra ho an'ny alikaola
Hanatsarana ny traikefanao misotro rano mandritra ny fahatsiarovana tsy hay hadino ny fahatongavan-tsofina zaza mihetsiketsika volon-trondro.
Famolavolana tsy manam-paharoa - mpihaingo mpitsoka baolina Ny fitoviana ny tarehy karandoha miaraka amin'ireo fitaratra mitifitra avo roa heny eo amin'ny tady fisehoanao hazo dia hampamirapiratra ny tranonao.
Volume: 750ml / 26 oz
Haavo: 190mm / 7.5 santimetatra
Color: mazava na araka izay takinao
Hoyer Glass dia natokana ho an'ny famolavolana sy famoronana famatsiana fitaratra, famokarana tsara. Manome anao tsy fivadihana 100% sy vahaolana matihanina izahay raha manana fanontaniana momba ny vokatra.
Fitaovana tsy mitarika - Tsy misy singa matevina ary tsy ahitanao fahasalamana kokoa ny fahatsarany
Tady voaisy tombo-kase - boribory ny tadiny, boribory sy malefaka, miaraka amin'ny sarona fitaratra fitaratra, tsy mora ny mitsoka sy mitahiry amim-pahatokisana.
Famolavolana mahaliana - endrika mahaliana sy mahazatra mahazatra, mahavariana. Fanomezana tsara ho an'ny namana.
Fahasamihafana lehibe - volan'ny 750ml mba hanomezana ny filanao divay. Manohana ny fanamboarana mahazatra izahay raha mila fahaiza-manao lehibe kokoa ianao.
Mora diovina - Azafady ampiasaina amin'ny rano sira na vinaingitra fotsy mba hanadiovana, aza mampiasa rano mangotraka mba hodiovina! Ny fitaratra azo avy amin'ny hafanana dia azo fangaroina. (Soavaly amin'ny hafanana: -20℃ hatramin'ny 150 ℃)
Size Boky: 750 ml Haavony: 19 cm Boky: 26,4 oz Haavony: 7,5 santimetatra
MOQ 10,000 pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
Previous: Tsara ny lakozia fitaratra tsara tarehy miaraka amin'ny Stainless vy Lid
Manaraka: 750 ml tavoahangy maintso Green Glass Bordeaux
tavoahangy divay tokana
fitaratra tavoahangy divay
manamboatra tavoahangy divay
375 ml Nordic Glass Bottle Decanter
Tavoahangy ronono miloko 16oz
7 oz 200ml boribory boribory vita amin'ny Jar Jar Yogurt ...
450 ml tavoahangy vera misy baso miaraka amin'ny tampon-tsofina
Tavoahangy fisotroana fitaratra 8oz ho an'ny fisotroana
100ml boribory tavoahangy feno tavoahangy tavoahangy tavoahangy ronono ...